Madaxweyne Siilaanyo Oo Day’arta Ugu Digay Dhaqamada Wiiqa Xadaaradaha Bulshada October 11, 2017 : Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo Oo Day’arta Ugu Digay Dhaqamada Wiiqa Xadaaradaha Bulshada October 11, 2017
Madaxweyne Siilaanyo Oo Day’arta Ugu Digay Dhaqamada Wiiqa Xadaaradaha Bulshada
Hargeysa :-(SM)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa da’yarta Somaliland gaar ahaan ardayda jaamcadaha ka qalin jabisay uga digay in ay ku milmaan dhaqamada xun-xun ee aafeeya ilbaxnimadda iyo horumarka bulshada, sida qabyaaladda tahriibka iyo dal-nacaybka.
Waxaanu madaxweyne Siilaanyo ku amaanay dhallinyarada reer Somaliland in ay yihiin kuwo ku wanaagsan tacliinta, iyadoo ay jiraan arday Somaliland u dhashay oo guul waaweyn oo dhinaca waxbarashadda ah ka soo hooyay jaamacado dibadaha ku yaalla.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo shalay hadal ka jeediyay munaasibad loo qabtay qalin jebinta dufcadii 9-aad ee ka aflaxday Jaamacada Admas oo tiradoodu dhammayd 374 arday.
Madaxweynaha ayaa ugu horayn waxa uu hambalyo u diray ardayda qalin jebisay iyo macalimiinta jaamacadda Admas qaybteeda Hargaysa, waxaanu tilmaamay in jaamacadda Admas ay kaalin weyn kaga jirto kobcinta aqoonta dalka; “Waxaan si weyn u bogaadinayaa maamulka, madaxda iyo macalimiinta Jaamacadda Admas, dedaalka iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddadii ay Jaamacaddu jirtay. Jaamacadda Admas waxay kaalin muq leh ka qaadatay, tayeynta iyo casriyeynta waxbarashada dalka, isla markaana waxay ku guulaysatay horumar weyn, muddadii ay jirtay,” ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland.
Waxa kaloo uu intaas ku daray; “Waxa xusid mudan, in Ardayda Jamhuuriyadda Somaliland, meel kastoo ay joogaan in ay waxbarashada ku wanaagsan yihiin, iyadoo ay jiraan arday reer Somaliland ah oo guulo waa weyn ka soo hooyay Jaamacaddo ku kala yaalla dalalka dibadda. Sidaa darteed, waxaan idinkula dar-daarmayaa in ay-daan ka daalin waxbarashada, oo aad sii wadaan hal-ganka iyo dedaalka aqoon raadinta, si aad u gaadhaan heer aad u sarreeya.”
Madaxweynaha Somaliland wuxuu ugu dambayn uu erayo guubaabo ah u diray guud ahaanba da’yarta Somaliland, waxaannu yidhi; “Guntii iyo geba-gebadii, waxaan idinku guubaabinayaa, in aad ka fogaataan dhaqamada xun ee aafeeya il-baxnimada iyo horumarka bulshoooyinka caafimaadka qaba, sida kala-qaybsanaanta, qabyaaladda, tahriibta, dal nacaybka iyo balwadaha.”
« Guddiga Ilaalinta Hantida Qaranka Ee Golaha Wakiilada Somaliland Oo Fariin Adag U Direy Xukuumadda Madaxwayne Siilaanyo Kana warbixiyay Kulan Ay La Qaateen Wafti ka Socday Hay’add Laga Leeyahay Maraykanka
Cabdillaahi-Jawaan Oo Madaxweynaha Ugu Baaqay Inuu Xakameeyo Beeshiisa Oo Uu Sheegay Inay Dalka Ku Celinayso 1991 October 11, 2017 »